I-LG G8 ThinQ: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
I-LG G8 ThinQ: Isiphelo esitsha sophawu lweKorea
Umhla wokuqala we-MWC 2019 usishiyele uninzi lweendaba. Ithuba lika LG ngoku. Kwezi veki bekukho amarhe amaninzi malunga nokuba yintoni uphawu lwaseKorea lwaluza kuzimasa umsitho. Imodeli yokuqala ethi uphawu lwaseKorea lusishiye yi-LG G8 ThinQ, i-smartphone yakho entsha ephezulu. Kwakhona kuza nobukrelekrele bokuzenzela kwesi sizukulwana sitsha.
Le LG G8 ThinQ iza nothotho lweempawu ezinomdla kakhulu. Enye yazo kukuba sifumana isikrini esivumela ukuba simamele umculo. Inqaku eliqinisekileyo lokuvelisa umdla. Yintoni esinokuyilindela kwesi siphelo sitsha sophawu lweKorea?
Ngokuphathelele kuyilo, uphawu lwaseKorea luyaqhubeka ukubheja kwinotshi yendabuko, endaweni yenotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi. Ngasemva kwesi sixhobo sifumana ikhamera kathathu. Ukongeza, iza neyona processor inamandla kwintengiso ye-Android. Ke sinokulindela amandla amakhulu kwisixhobo se-LG.
1 Ukucaciswa kwe-LG G8 ThinQ
Ukucaciswa kwe-LG G8 ThinQ
Umvelisi waseKorea uhambise isithethi somzimba kwifowuni. Endaweni yoko, kule LG G8 ThinQ yi-DAC yefowuni, i-Quad DAC engama-32, enoxanduva lokuhambisa ukungcangcazela kwiglasi ukuze izwakale ngeglasi. Alithandabuzeki elona phawu ligqabileyo kule modeli yohlobo. Ke kuyakufuneka sibone ukuba isebenza njani kunye nendlela abasabela ngayo abasebenzisi. Le yinkcazo yesixhobo.
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-LG G8 ThinQ
Umzekelo G8 ThinQ
Isikrini I-6.1 intshi OLED ene-QHD + isisombululo se-3120 x 1440 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio
Inkqubo IQualcomm Snapdragon 855
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128GB (iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-2TB nge-MicroSD)
Ikhamera esemva I-16 MP ebanzi le-angle f / 1.9 + 12 MP f / 1.5 + 12 MP f / 2.4 ifowuni
Ikhamera yangaphambili MP eyi-8 ene-f / 1.7
Conectividad I-Bluetooth 5.0 GPS FM Radio USB-C 4G WiFi 802.11 a / c
Ezinye izinto Umva ongasemva wokufunda ngomnwe wokufunda ngomnwe Isazisi sesandla seNFC Resistance IP68
Ibhetri I-3500 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ubukhulu X x 151.9 71.8 8.4 mm
U bunzima I-157 gram
Njengoko kulindelwe ngaphakathi kuluhlu oluphezulu, uphawu lwaseKorea lukhethe isikrini se-OLED, olona mgangatho uphezulu kwintengiso. Imalunga ne- Iphaneli yesayizi ye-intshi eyi-6,1, kunye ne-19,5: 9 umlinganiso wesikrini kunye nesisombululo se-QHD +. Ngaphakathi kwi-LG G8 ThinQ sifumana iprosesa ye-Snapdragon 855, eyona inamandla kwintengiso.
Sifumana indibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwesi sixhobo. Ifika ngeWiFi 5, sineNFC yeentlawulo ezihambayo kwisixhobo, kunye neBluetooth 5.0 kuyo. Kwakhona irediyo ye-FM, eseseyona nto siyibonayo kwiimodeli ezininzi zorhwebo.
Kwakhona, Olunye lwezona zinto zidume ngesixhobo ziya kuba yi-ID yesandla. Ngumsebenzi osivumela ukuba sivule ifowuni ngokuqaphela isandla sethu. I-LG G8 ThinQ inesakhono sokwahlula ubume, ubukhulu kunye nezinye iimpawu zesandla somsebenzisi. Ke iya kuvumela enye indlela yokuvula isixhobo ngawo onke amaxesha.
Kwibhetri Sifumana i-3.500 mAh, Etshaja ngokukhawuleza. Ngokubhekisele kwiikhamera, uphawu lwaseKorea lukhethe ikhamera yangemva kathathu, 16 + 12 + 12 MP, eya kukuvumela ukuba uthathe iifoto ezintle. Inkampani isebenzise indibaniselwano yezinzwa, ezinje ngengile ebanzi kunye nomnxeba. Ke asizukuba neefoto eziqhelekileyo kunye nefowuni, enkosi kwi-zoom ebonakalayo kunye nekona ebanzi, ukongeza ekukhetheni kokufiphala kunye nobukho bobukrelekrele bokuzenzela. Enkosi ngayo sineendlela ezongezelelweyo zokufota kwifowuni.
Okokugqibela, sifumana omnye umsebenzi onomdla kwesi sixhobo. Ibizwa ngokuba yi-Air Motion, zeziphi izijekulo zasemoyeni esinokuzenza phambi kwekhamera yangaphambili yefowuni. Enkosi kwezi zimbo zomzimba kunokwenzeka ukuba uvule ifowuni. Thatha kwakhona ii-skrini, ubenako ukwenza iifowuni okanye utshintshe phakathi kwesicelo esinye nesinye. Inokuba ngumsebenzi oluncedo kwiimeko ezinje ngokuqhuba. Nangona kuya kufuneka sibone ukuba isebenza njani.
I-LG G8 ThinQ sele ingenisiwe ngokusesikweni kule MWC 2019. Nangona okwangoku akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokuqaliswa ukusuka esiphelweni esiphezulu sophawu lwaseKorea. Asinawo umhla wokufika kwayo ezivenkileni ngalo mzuzu. Ke kufuneka silinde uphawu lokusixelela ngakumbi ngalo.
Malunga nexabiso eliya kuba nalo le fowuni asinalo ulwazi ngokufika ezivenkileni. Ukwazi izixhobo zorhwebo, sinokulindela ukuba kubize. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ikhankanyiweyo. Siyathemba ukuva kwesi sixhobo kwiintsuku ezimbalwa.
Ucinga ntoni nge-LG G8 ThinQ?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-LG G8 ThinQ: Isiphelo esitsha sophawu lweKorea
Ixabiso leXiaomi Mi 9 iscandal